Faaqidaadda xiriirka Soomaaliya iyo Imaaraadka Carabta – Kasmo Newspaper
Updated - April 13, 2018 3:14 pm GMT
London (Kasmo), Xiriirka Soomaaliya iyo guud ahaan dalalka Carabta, marka laga reebo Libiya iyo Yamantii Koofureed (Cadan) oo dagaalkii 77 la saftay xulufadii Sofiyeetiga, wuxuu inta badan iska ahaa mid fiican oo tariikh ahaan ku dhisnaa diin iyo ganacsi.
Laakiin muddooyinkaan dambe waxaynu goobjoog u noqonnay duullaan qaawan oo dalalka, sida Amiirrada lacagta badan ee UAE iyo qaar kale, ku soo qaadayaan Qarannimada iyo Madaxbannaanida Soomaaliya. Arrimaha saldhigga u ah cadaawadda waxaa ugu weyn oo la taaban karaa waa siyaasadda dhexdhexaad-nimada ee Xukuumadda Soomaaliya ka qaadatay qalalaasaha ka aloosan Khaliijka carabta.
Intii muddo ahba, UAE iyo dalal kaleba waxay gudaha Soomaaliya ka waddaan dagaal durugsan (Proxy war) oo lagu ilaalinayo dano iyo masaaliix u adeegaya sidii loo wiiqi lahaa madaxbannaanida qarameed iyo midda dhuleed ee Soomaaliya.
1dii March Shirkadda DP World ee laga leeyahay UAE waxay maamulka Somaliland la gashay heshiis lagu wadaagayo Dekedda Berbera iyo Saldhig militari oo ku lifaaqan, looguna talagalay dagaalka ka socda Yaman.
Horraantii bishii Disembar 2017, Guddiga madaxabannaan ee Qarammada Midoobay (Monitoring Group), fadhigiisuna yahay Geneva, wuxuu Golaha Ammaanka u gudbiyay Warbixin lagu ashtakaynayo faragalinta gurracan ee UAE ka waddo Soomaaliya.
Bartamihii March, Soomaaliya waxay ashtako rasmi ah u gudbisay Golaha Ammaanka Qarammada Midoobay, taas oo uu hortooda ka akhriyay Ergayga dalka u matala, Ambassador Abukar Cismaan.
Shandado lacago qalaad oo caddaan ah
3 shandado Dibolomaasiyadeed ah oo lacago qalaad ka buuxaan ayaa noqday khayaanadii caalamiga ahayd ee u dambaysay oo ubucdeedu tahay Muqdisho. Shandadaha waxaa maalintii Axadda, 8 April, ka soo dejisay garoonka Caalamiga ah ee Muqdisho, diyaaradda Royal Jet oo nooca raaxada loo kiraysto, lagana leeyahay Abu-Dhabi.
Lacagtaas waxaa galbinaysay Saraakiil Imaraati ah oo tiradoodu gaarayso 47, waxaana garoonka Aden Cadde ku sugayay Safiirka UAE u fadhiya Soomaaliya, Maxamed Axmad Cusman Al-Xammadi. Shandadaha oo sida muuqata ay ka maqnaayeen astaamihii caadiga ahaa ee Dibolomaasiga waxaa qabtay lana wareegay saraakiisha Kastamka garoonka.
Xaggee baa lacagtaan haddaba loo waday?
Saraakiisha Imaaraadku waxay caddeeyeen in ay ahayd miisaaniyaddii mushaarka iyo saadka ciidammo ay ku tababaraan xero military oo ku taalla Muqdisho.
Wasaaradda arrimaha Dibadda Abu-Dhabi waxay ku eedeysay Saraakiisha Muqdisho in ay gacmaduub ku sameeyeen loona hanjabay shaqaalihii diyaaradda, taas oo ka soo horjeedda heshiiskii is-afagardka ahaa (Memorandum) ee is-kaashiga military oo dhexmaray 2da dal sannadkii 2014kii.
Laakiin Wasiirka Gaashaandhigga Soomaaliya, Maxamed Mursal Sheikh ayaa Talaadadii shaaca ka qaaday in iskaashigii military ee kala dhexeeyay UAE la joojiyay, xukuummaduna qaadi doonto mas’uuliyadda daryeelka ciidankeeda, wixii maanta ka dambeeya.
Xilliga lagu soo beegay qulqulka lacagtaan
Waa dhab in, dal xukuumad jilcani ka taliso, kaabayaashii asaasiga ahaa ka maqanyihiin, ka soo kabanaya in ka badan 27 sano oo burbur ah, lacagta intaas le’eg ( $ 9,6 malyuun oo Dollar, una dhiganta AED 35,5 malyuun oo Dirham) ugu filantahay maalgalinta ciidan gaar ah (Calooshood u shaqaysta) iyo in lagu laaluusho kala bar siyaasiyiinta dalka.
Xilliga lagu soo beegay qulqulka lacageed ee lama filaanka ah iyo qaabka la adeegsadaay (oo ka baxsan Bangiyadii iyo Xawaaladihii dalka), wuxuu dhab ahaantii keeni karayaa tuhun xoog leh oo ku saabsan in loo waday si loogu xalliyo, si xoog leh oo markaan kama dambays ah, qalalaasihii dastuuriga ahaa ee toddobaadyada ka taagnaa Muqdisho.
Tillaabadaas oo, si aan mugdi ku jirin, lagu macnayn karo, haddii ayanba ahayn afgambi, isku dey la damacsanaa in lagu maja xaabiyo karaamada iyo madaxbannaanida qarameed ee Ummadda Soomaaliyeed, iyada oo loogu soo dhuumanayo duruufaha maanta dalka ka jira.